Friday February 28, 2020 - 19:03:26 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Wararka nagasoo gaara gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in markale duqeyn xagga cirka ay diyaaradaha dagaalka Mareykanka ka geysteen deegaan gobolka katirsan waxaana jira khasaare dad shacab ah soo gaaray.
Maanta gelinkii dambe ayay diyaarad aan duuliye laheyn nuuca loo yaqaan Drone-ka waxay duqeysay goob ay dad birima gaydda ah uga sugnaayeen deegaanka Kuunya Barroow oo qiyaastii 90Km ujira magaalada xeebeedka Baraawe.
Wariye ku sugan Sh/hoose ayaa sheegay in duqeynta ay ku dhaawacmeen haweenay 70 sana jir ah iyo canug yar oo aan qaan gaarin.
Goob joogayaal ayaa sheegay in dadka waxyeelladu soo gaartay ladhigay isbitaal Maxalli ah halkaas oo xaaladooda caafimaad lagula tacaalayo, duqeymaha aan kala sooca laheyn ee diyaaradaha Mareykanka ka geysanayaan Koonfurta Soomaaliya ayaa sare usii kacaya.
Isbuucii lasoo dhaafay duqeyn ka dhacday degmada Jilib ee Jubbada dhexe ayuu Mareykanku ku dilay maamulihii shirkadda Hormuud ee degmadaasi ahaana nin beeralay ah oo bulshada dhaxdeeda caan ka ahaa.